January 12, 2021 - ApannPyay Media
FACEBOOK သုံးခြင်းဟာသင့်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိနေကြောင်း သိနိုင်မယ့်အချက်(၇)ချက်
March 1, 2021 January 12, 2021 by ApannPyay Media
FACEBOOK သုံးခြင်းဟာသင့်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိနေကြောင်း သိနိုင်မယ့်အချက်(၇)ချက် အခုချိန်မှာ Facebook ကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင် လူနှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမကတော့ အချိန်းဖြုန်းခြင်း အတွက် အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ဆိုပြီး ပြောနိုင်တယ်။ ဒုတိယကတော့ Facebook ကို မုန်းနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို နှစ်သက်နေလို့ပါပဲ။ နှစ်သစ်ကူးမှာ Facebook လုံးဝမသုံးတော့ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အားလုံးက Facebook ကို တိတ်တဆိတ် သဘောကျနေကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။။ဒီကွန်ယက်ဟာ ထောင်ချောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်ပိုင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ ဒီ လူမူကွန်ယက် ကိုအသုံးချရမယ့် နေရာကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေတယ်။ ပေါင်ချိန်ကျဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန်ချက်တွေရနိုင်တာ လူမှုကွန်ယက်လောက် ဘယ်နေရာမှ မရှိပါဘူး။ Facebook မှာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေတဲ့ အစီအစဉ် … Read more
သင်္ဘောသီးတွေ ပက်ပက်စက်စက် သီးမှည့်နေအောင် စိုက်ပျိုးနည်း
January 12, 2021 by ApannPyay Media
သင်္ဘောသီးတွေ ပက်ပက်စက်စက် သီးမှည့်နေအောင် စိုက်ပျိုးနည်း ဓာတုပစ္စည်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာမပါဘဲနဲ့ အသားထူထူ၊ အစေ့နဲနဲ ပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ရမယ်။ အစေ့ကို တစ်ရက် နေလှန်းပြီးမှ ပျိုးပင်ဖောက်ပါ။ အဲ့ဒီပျိုးပင်လေး (၇-ရက်)ပြည့်တဲ့အခါ ခွဲစိုက်မယ့် နေရာကို (၁) တွင်းဝ တစ်ပေ၊ အနက်တစ်ပေခွဲတူးပြီး တွင်းထဲကို သစ်ရွက်ခြောက်ဖြစ်စေ ကောက်ရိုးခြောက်ဖြစ်စေ ထည့်ပြီးမီးရှို့ပါ။ နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြာကျပြီးတာနဲ့ တွင်းထဲကို ရေအပြည့်လောင်းပြီး တစ်ညထားပါ။ (၂) အပင်စိုက်မယ့် တွင်းအောက်ခြေမှာ ထုံးမှုန့်ငါးဆယ်သားခန့်ဖြူးပြီး ထုံးပေါ်မှာ မြေဆွေး လက်ငါးသစ်ခန့်ထည့်ပါ။ (၃) လ္ဘက်ရည်ဆိုင် တွေမှာ စွန့်ပစ်စုပုံထားကြတဲ့ နှပ်ပြီးသားအချိုခြောက် အဖတ်တွေကိုယူ နွားချေးခြောက်နှင့်ဆတူ ရောသမမွှေပြီး တစ်နေ့လှန်းပါ။ ပြီးလျှင် တွင်းထဲသို့ တစ်ထွာခန့်ထပ်ဖြည့်ပါ။ ၎င်းအပေါ်မှထပ်မံ၍ မြေဆွေးအပြည့် ထည့်လိုက်ပြီးပျိုးပင်ကို … Read more
ထမင်းစားကြတဲ့အခါဒီအချက်လေးတွေကို ရှောင်ပါ အစာစားရင် သတိယှဉ်ပါ ထမင်းစား ကြတဲ့အခါ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တဲ့ အပြုအမူတွေကို လေ့လာ သိရှိနိုင်အောင် စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။အစာစားရင် သတိယှဉ်ပါ။ လူတစ်ယောက် အစာစားပုံ အထူးသဖြင့် ထမင်းစားပုံကို ကြည့်ပြီး ဒီလူရဲ့ စရိုက်သဘာဝကို ခန့်မှန်းနိုင်သလိုပဲ သူ့ရဲ့ ကံဇာတာ အဆိုးအကောင်းကလည်း ထမင်းစားသောက်ပုံကနေ ထင်ဟပ် ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ဥပမာ ထမင်းစားတဲ့အခါ ဟင်းဖတ်တွေကို ထမင်း နဲ့ ရောမစားဘဲ ထမင်းအောက် မြှုပ်ထည့်ပြီးမှ စားတတ်ရင် ဒီလူဟာ လျှို့ဝှက်တတ်သူလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။တချို့ကတော့ ထမင်းကို ပလုတ်ပလောင်း စားရင်းကနေ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ လျှောက်ပြောနေတတ်ကြပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ ထမင်းအပြည့်နဲ့ မပီမပြင် ပြောနေသူတွေကို ရှေးလူကြီးတွေက ဆင်းရဲ တာရှည်တတ်တယ် ဆိုပြီး ဆုံးမလေ့ ရှိပါတယ်။ထမင်းစားရင် … Read more
သပိတ်ကျင်းမြို့အနီး ရွှေကြောပေါ်သဖြင့် လာရောက်တူးဖော်သူများလာ မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် သပိတ်ကျင်းမြို့အနီးမှာ ရွှေကြောတစ်ခုပေါ်လာတာကြောင့် ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေ လာရောက်တူးဖော်နေကြတယ်လို့ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။ သပိတ်ကျင်းမြို့ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာ၊ဒေသအခေါ်၊ ရေလာဘိချောင်းဖျား အနီးမှာ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်က ရွှေကြော တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရင်က ရွှေတူးဖော်မှု လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး တိမ်ကောသွားတဲ့ နေရာကို ရွှေရှာစက်တွေနဲ့ လိုက်လံ ရှာဖွေခဲ့ရာက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အမှတ်(၁) နယ်မြေမှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးလွင်က” ရှေးရှေးတုန်းက လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထဲကနေပြီးတော့မှ ပေါ်လိုက်တာပါ။ လုပ်ကွက်ရယ်လို့ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ရွှေကြောပါ” လို့ ပြောပါတယ်။ လတ်တလောမှာ လူဦးရေ တစ်ရာနီးပါးလောက် လာရောက် ရှာဖွေ … Read more
ယနေ့ မြန်မာဝတ်စုံလို့ပြောပြီးဝတ်ဆင်နေကြတဲ့ ပုဆိုးနဲ့တိုက်ပုံဟာ မြန်မာဝတ်စုံမဟုတ်ပါ
ယနေ့ မြန်မာဝတ်စုံလို့ပြောပြီးဝတ်ဆင်နေကြတဲ့ ပုဆိုးနဲ့တိုက်ပုံဟာ မြန်မာဝတ်စုံမဟုတ်ပါ ယနေ့ မြန်မာဝတ်စုံလို့ပြောပြီးဝတ်ဆင်နေကြတဲ့ ပုဆိုးနဲ့ တိုက်ပုံဟာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံမဟုတ်ပါ။ တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယ လူမျိုး ၂ခုရဲ့ သွေးနှောဝတ်စုံ ပါ။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ဆိုသည်မှာ ဦးနေဝင်း ခေတ်တုန်းက တဲ့။ သိပ်ပြီး အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်တွေကို လူကြားကောင်း သိပ်လုပ်ပြနေတဲ့အချိန်။ ဦးနေဝင်းကြီး အာဏာစက်အောက်က ပါချုပ်ကြီးကလည်း ဗောင်းတော်ညိတ် စိတ်တော်သိရလေတော့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပေါ်ကိုလည်း ချုပ်ချယ်မှု လွှမ်းမိုးနှိုင်မှု ရှိအောင်လုပ်တဲ့သဘောလည်း သက်ရောက်အောင်ဆိုပြီး မြန်မာအမျိုးသားဝတ်စုံတွေချည်း ဝတ်ဆင်ရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ပါလေရော။ ကျောင်းသားတွေကြား ဂယက်ကြီးရိုက်ပြီး တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေကြပေမယ့် ဖိနှိမ်မှု ပြင်းထန်ခဲ့တော့ မကျေနပ်ပေမယ့် တော်ရုံ ထကြွဖို့ ဆိုတာက ချက်ချင်းမလွယ်ဘူးလေ။ အမိန့်ထုတ်ပြီး နောက်တနေ့ ကျောင်းဝန်းထဲ ထူးထူးခြားခြား … Read more
အိပ်ပျော်စေတဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ်အိပ်ဆေးမှုန့် အိပ်မရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေကြား ပြင်းထန်တဲ့ ဇီဝဓာတ်ပြုမှု ဖြစ်ပွားပါတယ်။ ကံအားလျော်စွာနဲ့ ရိုးရှင်းပေမယ့် တကယ် ထိရောက်တဲ့ ဆေးနည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ယင်းမှာ မကြာခဏ အိပ်မပျော်ရောဂါခံစားသူများအတွက် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ သူ့မှာ ဆားနဲ့ သကြားသာပါဝင်ပေမယ့် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပေးပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပင်လယ်ဆား ထမင်းစားဇွန်း (၂) ဇွန်း သဘာဝသကြားညို ထမင်းစားဇွန်း (၂) ဇွန်း ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း (၅) ဇွန်းပြင်ဆင်ပုံပြင်ဆင်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံး ပလပ်စတစ်အိတ်တစ်ခုထဲ ပေါင်းစပ်ပြီး တစ်သားတည်းကျသွားအောင် သေချာ ခါယမ်းပေးရပါမယ်။အသုံးပြုပုံညအိပ်ရာမဝင်မီ သို့မဟုတ် ညတစ်ရေးနိုးတဲ့အချိန်မှာ ယင်းအမှုန့်ကို လျာအောက်မှာ ထားပေးရပါမယ်။ အရေပျော်သွားတဲ့အထိပါ။ သွေးကြော်ထဲ … Read more
သေ​နေ့မ​စေ့​သေး​သော​နေ ့(သို့မဟုတ်​) ​သေကံမပါ​သေး​သောည
သေ​နေ့မ​စေ့​သေး​သော​နေ ့(သို့မဟုတ်​) ​သေကံမပါ​သေး​သောည စာဖတ်သူတို့အတွက် စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပီနော် … အိမ်​ကို​ည​နေ​ခြောက်​နာရီခွဲ​လောက်​မှ ပြန်​​ရောက်​​တော့ ​အမျိုးသားက ညစာစားဖို ့ဟင်​း​နွှေး ဘာညာ သူပြင်​လိုက်​မယ်​ဆိုပီး ​အောက်​ထပ်​မှာ ပြင်​ဆင်​​နေခဲ့တယ်​…. ကျ​မတို ့အိမ်​က အ​ပေါ်ထပ်​နဲ့ ​အောက်​ထပ်​ အ​တော်​​လေး​အော်​​ပြောမှ ကြားနိုင်​တာပါ….သမီး​လေးနဲ့ ကျမ အိမ်​အ​ပေါ်တက်​လာခဲ့ပီး….ကျမလုပ်​စရာ​လေးရှိလို ့သမီး​လေးကို တီဗီ ဖွင်​့​ပေးပီး….လုပ်​စရာရှိတာ​လေးလုပ်​​နေခဲ့ပါတယ်​… သမီး​လေးက​တော့ အိပ်​ရာ​ပေါ်မှာ ​ဆော့ရင်​းကစားရင်​း သူစိတ်​ဝင်​စားတဲ့သီချင်​း​လေး​တွေလာရင်​ တီဗီ​ငေးရင်​း​ပေါ့….သမီး​လေးက အိပ်​ရင်​ ဟို​ကျော်​ဒီခွအိပ်​တတ်​လို ့ကုတင်​ကိုဖြုတ်​ပီး သံမံတလင်​းမှာ ဖ​ယောင်​းပုဆိုးခင်​းပီး မွေ့ယာခင်​းပီး ကျမတို ့အိပ်​ကြပါတယ်​….. အိပ်​ယာတစ်​​နေရာထဲ အခင်​းရှိပါတယ်​…ကျန်​တဲ့အ​ပေါ်ထပ်​တစ်​ထပ်​လုံး ဖ​ယောင်​းပုဆိုးခင်​းထားတာပါ….ကျမတို့အိပ်​ယာရဲ့ ​ခေါင်​းရင်​းမှာ မီးပလပ်​​ပေါက်​ရှိပါတယ်​…အဲ့မီးပလပ်​​ပေါက်​က​နေ ဘုတ်​ခုံ(extension)ကြိူး​ခွေချပီး အမျိုးသားရဲ့ ဖုန်​းကိုအားသွင်​းထားပါတယ်​… ကျမ လုပ်​စရာရှိတာ​လေး​တွေလက်​စသတ်​ပီး သမီး​လေးနားထိုင်​ရင်​း ဘုတ်​ခုံမှာ ကျမဖုန်​းကို ထပ်​အားသွင်​းလိုက်​ပါတယ်​….သမီး​လေးက လှည်​့ကြည်​့ပီးမြင်​သွား​တော့….ဂိမ်​း…ဂိမ်​းဆိုပီး … Read more
ရွှေဝတ်ဆင်ခြင်းမှကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုနိုင်သည့် အချက် ၅ ချက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတော့ လူတွေရဲ့အလှအပတန်ဆာအဖြစ် ရွှေနဲ့တန်ဆာဆင်ကြသလို ရည်ရွယ်ချက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရယ်မရှိဘဲ ဆွဲဆောင်မှု ရှိဖို့သက်သက်သာ ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ ရွှေလက်ဝတ်ရတနာတန်ဆာအဖြစ်ကျန်ရှိနေတာတွေ့နိုင်သေးသလိုပဲ အ လှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ထိရောက်မှုရှိစွာ အကျိုးရှိတာကိုပါ သိလာကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်တွေတုန်းကတော့ ရွှေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆေးဝါးဆိုင်ရာအတွက်လည်း အသုံးဝင်တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင် းတဲ့ဘက်က အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ရွှေကို သာမန်ကျန်းမာရေးပြဿနာလေးတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိတွေ့သည့်တိုင်အောင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိစေသလဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁) အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းလက္ခဏာများအတွက် ကုသနိုင်ခြင်း အဆစ်အမြင်ရောင်ရမ်းတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့အခါ ရွှေကို အသုံးပြုကြတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၄ကာရတ်ရှိတဲ့ ရွှေကို အေ ရပြားမှာ … Read more
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖို ့သိထားသင့်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များ
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖို ့သိထားသင့်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များ ကွန်ပြူတာဆိုတာဟာ ကိုယ့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုပေမယ့် အသုံးဝင်အောင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ဘယ်လိုလှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမှာပါ။ ၁- Control + T Browser မှာ အခြား Tab တစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် မောစ်နဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာကို သွားကလစ်နေဖို့မလိုပဲ Control + T နှိပ်လိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်။ ၂- ကွန်ပြူတာမှာ error တစ်ခုခုတက်ခဲ့လျင် ပညာရှင်ဆီသွားမပြခင် အရင်ဆုံး ဂူးဂဲမှာရှာဖွေကြည့်ပါ။ဂူးဂဲပေါ်မှာ ထောင်ချီတဲ့ ကွန်ပြူတာပြဿနာတွေအတွက် အဖြေရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာစေမယ့်အပြင် ပြင်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ၃- ငွေလဲနှုန်းတွေကို သိိချင်တယ်ဆိုရင် ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့တွက်ချက်နေစရာမလိုပဲ ဂူးဂဲ search bar မှာ 50 dollars to kyats … Read more
Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် ၏စာစောင်ကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးပါရစေ (စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ)Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့ မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့ သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ … Read more